Waa Maxay Carro-biyeed? | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Madaxa shirkadda BMW oo isagoo shir jaraa’id ku jira dhulka afka geliyay: DAAWO VIDEO
Cabdijabaar Sh. Axmed, September 16, 2015
Afrikaan.so, April 3, 2016
Cidna Ha ka Sugin Inay ku Dhiiro Geliso, Sababtoo ah Waa Masuuliyad Ku Saaran!
Cabdijabaar Sh. Axmed, January 10, 2020
Maxamuud Axmed Muuse — November 13, 2018
Carro biyeedku waa carrada leh daldaloolo kuwaas oo ay ka galaan biyuhu si ay u awdaan oo u adkeeyaan isqabsiga ciidda ayaa la dhahaa. Carro biyeedku ma ahan kuwo saafiya biyaheedu. Inta badan waa biyo caraq ah, oo saxaro iyo ilma aragto ka buuxdo taas oo hadhaw saamayn weyn kugu yeelanaysa. Biyahaan ayaa ka kooban walxo milmay oo ah kuwo milma iyo kuwo aan milmin oo ay ka mid yihiin nafaqada ay dhirtu qaadanayso, iyo millanka. Koritaanka dhirta, waxa aad uga qayb qaata carro biyeedka. Xiddidka ayaa meesha ka saara biyaha daldaloolada weyn ee ciidda.
Waxa meesha biyaha laga saaro iska buuxsha hawo, dhirta ayaa biyaha soonuugta. Biyaha ku jira carrada ayaa la adeegsadaa gabi ahaanba, ama ha qaadato dhirtu ama yaysan qaadan. Geeduhu ma awoodaan in ay biyaha kala soobaxaan daldaloolada yar yar ee ciiddu leedahay. Sababta ayaa ah waxaa aad uxoogan cuf isjiidadka biyaha. Waxaana isku haya qurubyo aad isugu dhegan.
Qurubyada carrada iyo haraadiga ayaa la soo daayaa nafaqo ahaa marka ay carradu ku milanto taas oo ay dhirtu si sahlan u soonuugaan iyagoo u soomaraya miiqyada xididka. Milanka biyaha ayaa iska caabiya isbeddelka ku dhacaya burburka biyaha. Xataa markii lagu daro walxo ama halaga saaro carrada. Awooda carrada ayaa ku tiirsan kiimikada carrada falgalka curiyayaasha ayaa isa soojiita marna isa siidaaya ayaa ah qurubyada carradda.
Ph: Waa xaddiga haydarojiin ka qayb qaata bayska iyo aasiidhka. Aasiidhka ayaa ah mid haddii carrada ay ku badan tahay ay anfac lahayn ciidaas. Waxna laguma beeran karo carrada ay aasiidhku ku badan tahay. Halka carrada ay aasiidhku ku yartahay waa midda ugu muhiimsan ee wax lagu beerto. Bayska ayaa macnihiisu yahay is fasaqa ka dhex dhasha marka laysku daro bays iyo aasiidh. Waxaana layiraahdaa baysku waa walax dhex dhexaadisa bayska iyo aasiidhka, waana mid carrada ka dhigta mid barxan.
Haddii PH-ku uu leegyahay lix (ph=6). Macnaheedu waxa weeye, haydarojiinta ayaa kaga badan boqol jeer milanka ku jira biyaha marka loo bar bar dhigo haydarog-saydh. Haddii PH-ku uu leeg yahay (ph=8), macnaheedu waa carro barxan oo fasaqan. Waxayna boqol jeer, kaga badan tahay milanka marka loo bar bar dhigo Milanka ay haydaro jiintu ku badan tahay. Sida lawada ogyahay dhulka qalalan ayaa PH-kiisu yahay mid dhex dhexaad ah waxa uuna udhexeeyaa ph>7-9. Halka dhulka qoyan oo sayaxa ah una dhexeeya PH<5-7). Waana carro aasiidh ah.
Carrada ugu wanaagsan waa midda uu PH-keedu gaarayo 7-9. Ma ahan mid aasiidh ah oo saamayn weyn ku leh carrada maxsuulkeeda. Haddii PH-ka uu yahay >5-7, carradaan noocaan ah ma ahan carro ku wanaagsan beerida. Waxaana loobaahdaa in carrada lagu daro walxo dhex dhexaadiya. Carrada aasiidhku kubadan tahay, waxaana lagu daraa kaalshiyaam kaarboonayt iyo soodhiyaam salfayt, kuwaas oo carrada aasiidhka burburiya.
Tags: Waa Maxay Carro-biyeed?
Next post Qodobada Aad Naftaada Ku Horumarini Karto
Previous post Waa Maxay Carro-dibir?